हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग डुबाउने यस्तो खेल ! इराकबाट रुदै अर्की चेली, युरोप लैजान २५० लाई करोडौं ठग्ने कन्सल्टेन्सी (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग डुबाउने यस्तो खेल ! इराकबाट रुदै अर्की चेली, युरोप लैजान २५० लाई करोडौं ठग्ने कन्सल्टेन्सी (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Jul 02, 2019
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३९९ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
निम्न विषयमा रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएका छन्ः
१. हेटौंडा सिमेन्ट दुई महिनादेखि बन्द, व्यवस्थापन र कर्मचारीको चरम लापरवाही
हेटांैडा । सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको मुख्य मेशिननै बिग्रदा दुई महिनादेखि उत्पादन बन्द भएको छ । ३४ बर्षदेखि दैनिक १६ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको उद्योगको मुख्य मेशिन बुस बेरिङ्गको प्रिजेकिङ्ग प्रेसर गेजमा समस्या आएपछि उद्योग बन्द भएको हो । यसअघि नै मेशिनको अवस्था हेरेर प्राविधिकले बाइवास प्रविधिबाट मेशिन नचलाउने निर्देशन दिएपनि उद्योगले वेवास्ता गरेको थियो । प्राविधिकको निर्देशन अवज्ञा गर्दा दुई महिनादेखि उद्योग नै बन्द भएको हो ।
२. तनहुँको चिमचिमे खोलाको झोलुङ्गे पुलमा स्कुलले पर्खाल लगाएपछि…
तनहुँ । अझैँ पनि देशका धेरै खोलामा झोलुङ्गे पुल समेत नबन्दा सर्बसाधारण वर्षातको समयमा त वारपार गर्नै पाउँदैनन् । तर, तनहँुको व्यास नगरापालिका–६ मा भने झोलुङ्गे पुल बनेर पनि प्रयोग विहीन बनेको छ, भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । व्यास नगरपालिका–६ र म्याग्देको स्थानीयले चिमचिमे खोला वारपार गर्नका लागि ४२ लाख बढी खर्चिएर एक बर्ष अघि निर्माण सम्पन्न भएको पुल स्थानीय इन्दु माध्यामिक विद्यालयको प्राङगणमा परेपछि निर्माण सम्पन्न भएर पनि सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
३. रोजगारीका लागि माल्टा लाने भन्दै करोडौंको ठगी
काठमाडौं । रोजगारीका लागि युरोप लाने भनेर ग्रीन फिल्डस् कन्सल्टेन्सी र ग्रीन फिल्ड एजुकेशन कन्सल्टेन्सीले २५० जना बन्दा बढी व्यक्तिलाई ठगेको छ । चावाहिल र बलाजुमा रहेको यी दुई कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकहरुले माल्टा लैजाने भन्दै करिब ४ करोड रुपैयाँ उठाएर फरार भएको पीडितहरुको भनाइ छ । दुवै कन्सल्टेनसीका सञ्चालक एकै जना आरपी गुरुङ हुन् । उनी अहिले सम्पर्क विहीन छन् ।